Sidee baa aasaas u noqon kartaa maalgashadayaasha? Just Weydiiso!
Su'aal: Sidee bay ufarag ahaan yar yar u helaan maamulayaasha hantida leh $ 1.5 trillion oo ah inay istaagaan oo lagu xisaabtamo isbedelka cimilada? Jawaab: Weydii.
Maalintii uu maamulka Trump ka qaaday Maraykanka Heshiiskii Faransiiska, McKnight Foundation waxay u dirtay maamulaheeda dhaqaalaheeda codsi fudud: fadlan ku biir warqad maalgashi on mitirka cimilada ka hor kulanka G20 ee Germany. Waxay ku boorisay dowladaha ka qayb galaya in ay hirgeliyaan Heshiiska Paris iyo in la wado maalgashado yar-yar oo carbon. Warqadda ayaa hoosta ka xariiqday in jilayaasha dhaqaale ee saameynta leh ay doonayaan in wax laga qabto cimilada. Waqtigaas, waxaa horey u saxiixay 280 milki hantiyeed iyo maamulayaal leh $ 17 trillion, sidaa daraadeed maamuleyaasheena ma noqon doonaan kuwa ugu horreeya.
Aasaasayaasha macaamiisha maalgashiga
Istaraatiijiyadani waa mid sahlan. Dhammaan xaruntii ugu dambaysay waxay tahay maalgeliye hay'adeed, oo bixinaya khidmooyinka maamulayaasha sanduuqa, sidaas darteed aasaas kasta waa macmiil. Marka macaamilku uu weydiisto adeeg bixiye dhaqaale inuu wax sameeyo, adeeguhu wuxuu tixgeliyaa oo go'aan ka gaarayaa sida wax u dhaqmayaan. Macaamiisha iyo kaqaybgalayaasha suuqyada, aasaasiyado waxay ku fili karaan wax badan saameyn maaddaama maalgashadayaashu ay horumarinayaan hawshooda Oo maahan heshiis weyn. Sida cilaaqaadka ganacsiga oo idil, mihnaduhu waxay oran karaan maya. Qaarkoodna way sameeyeen. Laakiin way waydiisaneysaa weli qiimaha. Markaa maxaa dhacaya markaad weydiiso? Halkan waxaa ah natiijooyinka codsiga McKnight ee 26 shirkadaha bixiya adeegga maalgashiga si ay u saxiixaan warqad ku saabsan isbeddelka cimilada:
9 maareeyayaasha ayaa sheegay in maya;
3 maareeyayaasha ayaa sheegay in ay isku dayi doonaan, mana aynaan maqal mar dambe;
3 maareeyayaashu kama jawaabin
4 maareeyayaashu waxay sheegeen inay hore u saxiixeen (hooray!); iyo
7 maamulayaal, oo wakiil ka ah $ 1.5 trillion, ayaa sheegay in haa (mar kale mar kale!)
Marka la isku daro, waxaynu helnay boqolkiiba 27% celcelis ahaan. Ma ahan mid xun. Maxay ku saabsantahay dhammaan dadka? Xaaladaha qaarkood waxay ku qanacsan yihiin sida jawaabaha kalsoonida leh sababta oo ah baaritaanku wuxuu carqaladeeyey wadahadal qiimo leh gudaha hay'adahaas. Labada xaaladood, maamulayaasha lacagta ayaa ka dooday codsiga iyaga oo leh shirkado badan oo waaweyn oo awood leh. Mid ka mid ah maareeyaha maaliyadeed ayaa noo qoray annagoo ku muujineynay inaan ka qoomameyneyno inaanan awoodin inaan kaqeybqaato Qofkan, oo si shakhsiyan ah u riixay dadaalka, wuxuu ku mahadsantahey codsigii macmiilka wuxuuna weydiistay in aan sii wadi doonno shirkadaha shirkadaha noocan oo kale ah mustaqbalka. Waxaan rajeyneynaa, maareeyahan lacageed ayaa noo sheegay, shirkadu waxay ku jiri doontaa meel ka wanaagsan oo ay ku tiraahdo haa. Tani waa talaabo horay loo qaaday iyada oo ay shirkadaha ugu horeysa ee munaasabadaha soo socda ay dhici karto inay diyaar u yihiin inay talaabo qaadaan.
Calaamad muujinaysa in Isbeddelka Cimiladu yahay Waxyaabaheena Noocyada Portfolios
Marka aasaaska ay waydiiso maamulayaasha sanduuqa inay wax ka qabtaan cimilada, waxaan u calaamadeyneynaa agaasimaha guud, La taliyaha Guud, iyo madaxa ganacsiyada hay'adaha isbedelka cimiladu waa qalab si loo ilaaliyo nashqadaheena. Waxaan sidoo kale siinaa rasaas ah kooxda heysata gudaha ee isku dayaya inay isbedel ku sameeyaan shirkad. Iyo waxa ku saabsan kharashka macaamilka? Warkii ugu fiicnaa ee dhammaan shaqaalaha aasaasiga ah ee mashquulka ah waa in adeegsiga istaraatiijiyadaha macaamiisha ay bilaash tahay oo aan gaar ahaan waqti qaadashada. Tusaale ahaan, warqadda G20 waxaa loo qoray oo abaabulay lix magacood kooxaha maalgashadayaasha caalamka. Dhammaan McKnight waa inay sameeyaan waxay email u direen maamuleyaasheenna oo raacnaa. Waxaan qiyaaseynaa mashruucan qaatay seddex saacadood oo shaqaale ah (xaqiiqda, boostada blogka ayaa u badan inay u baahan tahay wakhti dheeraad ah shaqaalaha). Marka la eego in McKnight ay $ 1,5 trillion oo abaabulisay $ 1.5 trillion oo bilawday wadahadal muhiim ah oo ka dhacay hay'ado maaliyadeed oo saameyn leh, waxaan dhihi lahaa waa soo noqoshada quruxda badan ee maalgashiga yaryar. Iyada oo la weydiiyay su'aal fudud, waxaan awoodnay inaan xoogga ku darno olole caalami ah oo dhammaaday oo ku dhowaad 400 oo maal-gashaday oo matalaya $ 22 trillion. Hadda taas waa codsi u qalma.
Sida Wadashaqayntu u dhexeyso Barnaamijka iyo Saadaasha Miisaaniyadeed ee Aasaasayaasha Wadista Wadajirta Guud
Isbeddelka Isbeddelka Cimilada McKnight si aad u Qaadato Saamaynta Saameynta Saameynta
By Marc Gunther Janaayo 2019
McKnight Taageeridda Ku-meelgaarka ah Nadiifinta Tamarta ee Deeqaha 4-aad ee Quarterly